‘टिम पठाउने’bout बंगलादेशले एक दुइ दिनमै निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने । उता त्यस्तै किसिमको कार्यक्रम’bout श्रीलंकासँग पनि भएको सहमति अन्तिम टुंगोमा पुग्न लागेको उनले बताए । श्रीलंका तयार भए बंगलादेशलाई पनि सम्मिलित गर्राई त्रिकोणीय प्रतियोगिता आयोजना गरिने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
‘श्रीलंका बोर्ड पनि यस सम्बन्धमा निकै सकारात्मक देखिएको छ,’ पाण्डेले भने । पाकिस्तानसँग वाषिर्क तालिकाअनुसारको कार्यक्रम’bout छलफल भइरहेको जानकारी उनले गराए । ‘यस सम्बन्धमा अन्तिम टुंगो पाकिस्तानमा हुने बैठकमा गरिनेछ,’ मार्च १९ मा पाकिस्तान जाने तयारी गरेका पाण्डेले भने ।
This entry was posted on बुधवार, मार्च 12, 2008 at 10:28 अपराह्न	and is filed under समाचारहरु. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
बुधवार, मार्च 26, 2008 at 1:22 अपराह्न
नेपालले भौतिक पर्ूवाधार निर्माणमा ध्यान दिने
काठमाडौं, चैत १२ – अन्तर्रर्ााट्रयस्तरका प्रतियोगिताको आयोजना एवं विभिन्न देशस“ग सम्बन्ध विस्तारका लागि नेपाल क्रिकेट संघ -क्यान) ले देशमा भौतिक पर्ूवाधार निर्माण एवं सुधारमा ध्यान दिने भएको छ ।
त्यसअर्न्तर्गत कर्ीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा सुविधा थप गर्ने काम सुरु भइसकेको उनले जानकारी गराए । त्यसबाहेक त्रिवि मैदानस“गै रहेको ल्याब स्कुल मैदान, भक्तपुरस्थित वीरेन्द्र सैनिक आवासीय महाविद्यालयको मैदान, मूलपानीस्थित क्यानकै निर्माणाधीन मैदान निर्माण एवं सुधार गरिनेछ ।
नेपालमा यसअघि भएका अन्तर्रर्ााट्रय प्रतियोगितामा म्याच रेप|mी एवं अधिकारीहरूले मैदानमा पर्याप्त सुविधा नभएको गुनासो एसियाली क्रिकेट काउन्सिल -एसीसी) मा लिखित रूपमा गरेको उनले बताए ।
कोहलपुरमा नया“ मैदान निर्माण एवं वीरगन्जको मैदानलाई अन्तर्रर्ााट्रयस्तरको बनाइने जानकारी पनि त्यस अवसरमा पाण्डेले गराए । पोखरामा पनि नया“ मैदान निर्माणको योजना रहेको औंल्याउ“दै उनले धरानमा सुविधायुक्त मैदान भएकाले भविष्यमा त्यसलाई विविध प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए ।
उनले बंगलादेशस“ग एक-अर्को देशका टिम भ्रमणका लागि तीन वर्षो कार्यक्रमको तयारी लगभग पूरा भइसकेको बताए । हालै मात्र पाकिस्तानमा सम्पन्न बैठकमा सहभागी हुने क्रममा त्यहा“को बोर्डले पनि १६ वर्षुनिका ‘ए’ टिम र एकेडेमी टोली पठाउने सम्बन्धमा तीन वर्षो कार्यक्रम बनाउन तयार रहेको जानकारी गराए ।